thinzar's blog: Handphone အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ Java apps များ
မှတ်သား၊ သားသွား ဆွဲသွားတယ်ဗျို့....
နောက် လိုတဲ့ သူတွေကိုလည်း ပြန်လည်ရှယ်ယာ လိုက်ပါဦးမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း. :)
4/12/08 6:59 PM
Sony Ericsson အတွက်ရော...? :)
14/12/08 12:38 AM
ဟုတ်ပါ့... တကယ်ကောင်း လိုအပ်မှုကို အသုံးဝင်ပေ၏။
14/12/08 3:41 PM
Mhaw sayar>> ရှဲယားရင်း အစ် ကဲရင်း (Sharing is caring) တဲ့ ကောင်းပါတယ် :)
mgthantzin>> အဲဒါကတော့ sony ericsson သုံးတဲ့သူတွေ ရှာဖွေပြီး share လုပ်သင့်တယ်ကွယ်။
ကိုလင်းဦး>> ဟုတ်တယ်။ လိုအပ်မှ သုံးဖြစ်တော့ အသုံးဝင်မှန်း သိသွားတာပေါ့။
16/12/08 2:36 PM